अनुसन्धान गर्न पीडितको जाहेरी हैन,... :: शोभा शर्मा :: Setopati
अनुसन्धान गर्न पीडितको जाहेरी हैन, सूचना नै काफी फरेन्सिक जाँचबुझ लगायत अनुसन्धान जारी: प्रहरी
शोभा शर्मा काठमाडौं, असोज १७
बलात्कारको आरोप लागेपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन।
महराले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले प्रहरी गुहारेको सय घन्टाभन्दा धेरै भइसकेको छ। उनले घटना भएको एक घन्टाभित्रै प्रहरीलाई घटनास्थलमै बोलाएर सबै विवरण दिएकी थिइन्।
उनको मौखिक उजुरीका आधारमा प्रहरी काठमाडौंको तीनकुनेस्थित घटनास्थल पुगेर उनले भनेको विवरण रेकर्ड गरी फर्केको थियो।
रोशनीको बलात्कार गरेको खबर मिडियामा छापिएपछि चौतर्फी दबाबबीच महराले अनुसन्धान सहज बनाउन भन्दै सभामुख पदबाट राजीनामा दिए। प्रहरीले भने उनीमाथि अनुसन्धान गर्न रोशनीको जाहेरी कुरेर बस्यो। अनौपचारिक रूपमा उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले नै भने, 'महिलाको जाहेरी आएको छैन। जाहेरी आए अनुसन्धान गर्न हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो।'
प्रहरीहरूको यस्तो भनाइविपरीत कानुनमा भने पीडितले लिखित जाहेरी नै दिनुपर्ने व्यवस्था छैन। मौखिक जाहेरी भए पुग्छ, अझ सूचना मात्र भए पनि पुग्छ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २१ (क) ले 'प्रचलित कानुनबमोजिम समयमै अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीसमक्ष कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिने' पीडितको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ। यसले जाहेरीलाई कानुनले अनिवार्य नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
'जाहेरी अनिवार्य होइन। अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न 'सूचना' आफैंमा प्रशस्त हुन्छ,' उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'टेलिफोनमा समयमै प्रहरी 'निकाय' मा गरेको 'सूचना' अपराध अनुसन्धानका लागि पूर्णतः कानूनी आधार मानिन्छ।'
सूचना पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'होस गुमाएकी वा विक्षिप्त अवस्थाकी महिला पाटीपौवा, वन, नदी किनार वा एकान्त स्थानमा बलात्कृत भए जाहेरी दिन को आउँछन्? बोल्न नसक्ने अवस्थाका स-साना बालिका वा रोगले थलिएर कमजोर अवस्थामा मगन्ते जीवन निर्वाह गर्न बाध्य वृद्धा बलात्कृत भए जाहेरी दिन को आउँछन्? जातीय हिंसाले बढाएको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा भएका हत्या वा बलात्कारजस्ता अपराधमा तथा आतंककारी हमलाबाट भएको नरसंहारमा जाहेरी दिन को आउँछन्?'
बलात्कारलाई राज्यविरूद्धको अपराध मानिन्छ। त्यसैले यसमा मुद्दा सरकारवादी हुन्छ। सरकारले पीडितको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लड्छ। श्रेष्ठ तर्क गर्छन्, 'यस्ता कतिपय दृष्टान्त छन्, जसमा पीडित स्वयंले जाहेरी दिनै सक्दैनन्। यस्तोमा अपराधको अनुसन्धान गर्नै नमिल्ने हो भने 'यस्ता अपराध राज्यविरुद्धका अपराध हुन्' भनेर किन भनिएको हो त?'
जुन प्रहरीले जाहेरी नआएको भन्दै रोशनीमाथिको बलात्कारमा अनुसन्धान गर्न आनाकानी गर्यो, उसैले महराले आफूलाई केही नगरेको भन्ने रोशनीको 'क्लिन चिट’ निवेदन भने बुधबार तुरुन्तै दर्ता गर्यो। यो निवेदन दिन उनका श्रीमान् चित्रजंग शाहीले डोर्याएर रोशनीलाई प्रहरी चौकी पुर्याउँदा उनको अनुहारमा अझै महराले गरेका हिंसाको निलडाम थियो। यही निलडाम उनले प्रहरीलाई घटना भएको रात आफ्नै डेरामा बोलाएर देखाएकी थिइन्।
उनको शरीरका तिनै घाउ साक्षी राखेर रोशनीलाई महराले केही नगरेको निवेदन प्रहरीले दर्ता गर्यो।
प्रहरीले अहिले आएर भने रोशनीको सूचनाकै आधारमा महरा बलात्कार काण्डको अनुसन्धान अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ। 'हामीले घटनास्थलको सुरक्षा, फरेन्सिक जाँचबुझ लगायत अनुसन्धानमा गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेका छौं,' काठमाडौं प्रहरीका एसपी उत्तमराज सुवेदीले भने, 'अनुसन्धानले के देखाउँछ, त्यसका आधारमा मुद्दा अदालतमा लैजानुपरे लैजान्छौं।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १७, २०७६, २१:१५:००